Vidio ny anti-depression tsy misy prescription! Mahatsiaro ho tsara kokoa, miaina amin'ny fahafenoana!
Hitantsika 6 vokatra azo omena anao
fahaketrahana dia fahasalamana mahazatra izay misy fiatraikany amin'ny asan'ny olona isan'andro. Ny marary tratry ny famoizam-po dia mety hanomboka hanana fahatsapana fa tsy manana hery hanaovana ireo zavatra izay tokony hataony amin'ny andavanandrom-piainany. Ny sasany kosa mety hahatsapa ho sosotra nefa tsy misy antony mazava. Ny soritr'aretin'ny famoizam-po dia samy hafa amin'ny olona tsirairay. Ny olona mahatsapa ho maivana sy milatsaka mandritra ny tapa-bolana mahery dia mitaky fiheverana manokana satria mety ho famantarana ny fahaketrahana io.
Matetika ny aretina. Ny vintana mety hahazoanao famoizam-po mafy dia 1 amin'ny 20 ary amin'ny ankapobeny ny vehivavy dia mety hijaly kokoa noho ny lehilahy. Ny ankizy sy ny zokiolona koa dia mety hijaly amin'izany. Ny famoizam-po dia mety ho fohy, nefa mety haharitra amam-bolana maro na taona maro aza. Raha ketraka ianao nandritra ny roa taona farafahakeliny, dia antsoina hoe famoizam-po maharitra.
Mba hahalalana ny toe-javatra dia mila fantatrao ny antony mahatonga ny fahaketrahana. Amin'ny alàlan'ny fahatakarana marim-pototra ny antony mahatonga ny famoizam-po dia afaka miasa amin'ny fomba mandaitra kokoa amin'ny fikarohana fanafody. Mazava ho azy fa tsy zavatra mora atao ny fitsaboana ny famoizam-po fa ho azonao bebe kokoa ny antony mahatonga an'io rehefa mijery ny antony mahatonga ny fahaketrahana ianao.
Ny famoizam-po dia inona no mahatonga ny famoizam-po?
Inona no mahatonga ny famoizam-po? Ny famoizam-po ve dia vokatry ny antony ara-batana toy ny neurotransmitter ao amin'ny ati-doha na ny antony ara-tsaina toy ny lamina eritreritra ratsy? Ny valiny tsy mahafa-po dia miankina amin'ny tsirairay.
Ho an'ny olona sasany, io toe-javatra io dia avy amin'ny tsy fandanjalanjana simika ao amin'ny ati-doha ary ho an'ny sasany ny tena antony dia ny fisainana ratsy. Ny antony hafa toy ny tsy fahampiana vitamina na fanatanjahan-tena be loatra dia mety ho meloka ihany koa. Raha fintinina, ny antony mahatonga ny famoizam-po dia samy hafa amin'ny olona tsirairay mankany amin'ny manaraka.
Toetra mampiavaka ny tena manokana
Ny toetra manokana manokana dia mety hahatonga ny olona iray ho mora tohina kokoa noho io aretina io. Ny olona sasany dia tsy mahomby amin'ny famahana olana na miatrika zava-mitranga tsy mahafinaritra. Na tsy sahy mangataka fanampiana amin'iza na amin'iza izy ireo, ka mijanona irery miaraka amin'ny olany. Ny toetra manokana hafa mety hahatonga anao ho marefo dia:
tahotra ny tsy hahomby
mitaky be dia be amin'ny tenanao
mahatsiaro ho tsy mendrika mendrika
Ny antony ara-batana lehibe dia ny fananana. Misy famoizam-po ve ao amin'ny fianakavianao? Avy eo ianao dia mety ho kivy kokoa.
Ary koa, ny zavatra sasany ao amin'ny vatanao indraindray dia mety hiteraka fahatsapana fahakiviana. Izany dia mandeha amin'ny hormonina, fanafody, alikaola ary zava-mahadomelina.
Ankoatr'izay, ny aretina ara-batana sasany dia matetika miaraka amin'ny fahatsapana fahaketrahana. Ohatra amin'izany ny korontana amin'ny tiroida sy ny korten adrenal, diabeta ary aretim-po.
Inona no mahazo anao amin'ny fiainanao
Ny traikefa tsara na ratsy na fisehoan-javatra izay manova ny fiainanao tampoka dia mety hahatonga anao ho ketraka. Ohatra amin'izany ny fahaverezan'ny namanao, ny famoizanao ny asanao na ny fifindranao any amin'ny tanàna hafa. Ary koa, ny trangan-javatra mampivarahontsana toy ny fandrobana na lozam-pifamoivoizana dia mety hahatonga anao ho ketraka.
Azonao atao koa ny ketraka amin'ireo tranga niseho taloha ela be. Ohatra, raha iharan'ny herisetra na fanararaotana ara-nofo ianao tamin'ny fahazazanao. Na raha maty aloha be ny iray amin'ny ray aman-dreninao.
Zava-dehibe ny fahatsapana fa ny olana, na avy aiza na avy aiza, dia hisy fiantraikany amin'ny sehatra roa mba hanasitranana ny fahaketrahana mila mandinika fomba fitsaboana izay hiatrika ireo faritra roa ireo.
Tsy mbola fantatra mazava ny fomba fivoaran'io aretina io. Heverina fa ny fizotry ny biolojika, ny antony ara-psikolojika, ny toe-javatra manokana ary ny hetsika manokana eo amin'ny fiainana dia manana ny anjarany amin'ny fampandrosoana ny fizotrany. Ireto misy ohatra vitsivitsy momba izay mety hiteraka famoizam-po sy hitaomana ny lalan-kalehany:
risika mitombo mandova: asehon'ny zava-misy fa ny aretina dia efa niseho matetika kokoa amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana.
traikefa mampiady saina: ohatra ny fanararaotana na fanaovana tsirambina, nefa koa fisarahana na fahafatesan'ny olon-tiana
korontana mitaintaina amin'ny fahazazana sy amin'ny fahatanorana, miaraka amin'ny tsy fahatokisan-tena sy ny tsy fahatokisan-tena
fiovan'ny biokimika: Hita fa amin'ny fahaketrahana dia miova ny metabolisma ao amin'ny ati-doha ary mampita miadana kokoa ny tsiranoka hozatra. Ny akora mpitondra hafatra sasany sy ny fanovana hormonina dia mety mitana andraikitra ihany koa.
aretina ara-batana toy ny tapaka lalan-dra, aretim-po, homamiadana na hypothyroidism
toe-piainana manavesatra: ohatra, ny adin-tsaina maharitra sy ny fangatahana na fanirery be loatra.
Tsy fahampian'ny jiro: Misy ny olona manohitra ny tsy fisian'ny hazavan'ny andro mandritra ny fararano sy ny ririnina manjombona amin'ny fahaketrahana.
Karazana fahaketrahana: inona ireo?
Tsy ny fahakiviana rehetra no mitovy. Afaka miovaova arakaraka ny malemy sy mahery. Ny habetsahan'ny olona mijaly amin'ny fahaketrahana dia miankina amin'ny fomba manelingelina ny fiasan'ny soritr'aretina isan'andro. Misy karazana fahaketrahana maro:
Ny hakiviana malemy
Amin'ny fahaketrahana malemy dia matetika no azo atao ny manohy ny ankamaroan'ny hetsika isan'andro. Na eo aza izany dia ilaina ny mandray am-pitandremana ireo fitarainana. Mbola betsaka ny zavatra azo atao amin'ny sehatry ny fisorohana hisorohana ny fitarainana matotra kokoa.
Azonao atao ny mamantatra ny fahaketrahana mafy satria maro ny soritr'aretina mitranga na satria mihombo haingana ireo soritr'aretina. Ny famoizam-po mafy dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainana andavanandro: rehefa ela ny ela dia tsy mandeha mankaiza ianao, tsy afaka miasa, mandeha miantsena, mikarakara ankizy ary manaraka ny gadona andro aman'alina. Ny ho avy, ny lasa, ny eto ary ankehitriny: toa loaka mainty ny zava-drehetra. Ny olona sasany dia mieritreritra ny fahafatesana: toa tsy dia ratsy kokoa aminy ny ho faty noho ny miaina amin'ny fahaketrahana.
Antsoina koa hoe 'depression unipolar' na depression "mahazatra". Ny aretin-ketraka dia rehefa misy olona ketraka na ketraka mandritra ny fotoana maharitra. Ny vanim-potoana isehoan'ny soritr'aretin'ny fahaketrahana dia fizarana mahakivy. Fizarana iray fotsiny ve io? Avy eo dia antsoina hoe aretina fizarana tokana. Raha miverina ny fizarana, dia antsoina hoe miverimberina ny aretin-ketraka.
Ny aretin-tsaina dysthmic dia 'malemy kokoa' noho ny aretin'ny fahaketrahana. Tsy maintsy nisy ny fahatsapana fahakiviana (malefaka) nandritra ny roa taona farafahakeliny ary, ho fanampin'izany, roa na mihoatra ny soritr'aretina mahakivy (ankoatry ny tebiteby na fanakanana psychomotor) dia tsy maintsy teo. Matetika ny soritr'aretina dia malemy kokoa noho ny amin'ny fahaketrahana, fa ny aretin-tsaina dysthymic kosa dia miaina mafy kokoa. Izany dia vokatry ny faharetan'ny aretina dysthymic lava.
Fantatra amin'ny famoizam-po manika. Amin'ny aretina bipolar, ny vanim-potoana mahafaly dia mifandimby amin'ny fotoana tsy fananana fanantenana. Mandritra ny vanim-potoana 'tsara' dia mahatsiaro tena matanjaka sy falifaly ny olona iray. Amin'ny aretina bipolar, dia misy fanavahana eo amin'ny karazana I sy ny karazana II. Karazan'aretina bipolar karazana I dia voalaza fa voamarina raha toa ka nisy olona iray farafahakeliny fizarana manic, nifandimby tamin'ny fizarana famoifoizana iray na maromaro. Ny Type II dia manondro ny fijaliana farafahakeliny fizarana fahaketrahana iray ary farafaharatsiny fizarana manic malefaka iray. Ny fizarana manic malefaka dia antsoina koa hoe hypo maniacal episode. Amin'ny fizarana hypomaniacal dia tsy dia ratsy loatra ireo soritr'aretina ka manelingelina ny fiasan'ny ankapobeny. Ny karazan'aretina bipolar malemy (na dia ambany) aza dia aretin-koditra.
Izany no izy rehefa, ankoatry ny fihetseham-po mahaketraka, dia misy ihany koa ny delestazy na ny halitiry. Ny delestazy dia matetika mifanitsy amin'ny famoifoizana amin'ny resaka atiny.
Ity karazana fahaketrahana ity dia mety hitranga amin'ireo vehivavy vao niteraka. Ny fahaketrahana aorian'ny fiterahana dia mitovy amin'ny soritr'aretina amin'ny fahaketrahana 'ara-dalàna', saingy ao anatin'ny efa-bolana aorian'ny fiterahana no mitranga izany. Ny soritr'aretina mahazatra indrindra dia ny fahatsapana fahakiviana ary ny tsy fahafinaretana amin'ny zaza.
Ny olona izay mijaly amin'ny fahaketrahana fotsiny amin'ny fararano, ririnina ary / na amin'ny fiandohan'ny lohataona dia mijaly matetika amin'ny famoizam-po. Ny famoizam-po amin'ny ririnina no tena fantatra. Fambara ny fahaketrahana amin'ny ririnina dia: ketraka sy ketraka, matory be, reraka, mora sosotra, mihinana fisondrotana be. Ny fahaketrahana amin'ny ririnina dia mitranga rehefa miverina mandritra ny roa taona misesy farafahakeliny ireo soritr'aretina. Ny fahaketrahana amin'ny ririnina dia matetika mitranga amin'ny vehivavy noho ny amin'ny lehilahy. Ny fiovan'ny hazavan'ny andro dia manelingelina ny famantaranandro biolojika, izay amin'ny tranga maro dia miteraka famoizam-po amin'ny ririnina. Ny hormonina melatonin dia mety mitana andraikitra. Ny ririnina manga dia karazany maivana kokoa amin'ny famoifoizana amin'ny ririnina. Misy ny fitarainana, fa ny olona mijaly noho ny ririnina manga dia tsy marary. Ireo soritr'aretina dia mitovy amin'ny fahaketrahana amin'ny ririnina, saingy tsy dia mafy loatra.
Ara-nofo ve ny fahaketrahana?
Ny génétique dia mety hametraka ny olona ho ketraka kely saingy sarotra ny manapa-kevitra. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia azo inoana kokoa ny mahita ny toe-javatra mihazakazaka ao amin'ny fianakaviana noho ny fihetsika sy ny fomba fisainana izay nampitaina noho ny hoe ny génétika dia mitana andraikitra lehibe. Saingy na dia antony iray aza ny génétika dia tsy dia misy fiantraikany amin'ny fomba fitsaboana ny fahaketrahana io. Ny fitsaboana mahomby amin'ny fahaketrahana dia mbola azo atao.
Fantatra ve ny fahaketrahana?
Azo ianarana ny fepetra. Ny eritreritra ratsy sy ny fitondran-tena ratsy dia azo ampitaina amin'ny fianakaviana, araka ny voalaza tetsy aloha, na ny olona iray dia afaka mianatra fisainana sy fihetsika ratsy avy amin'ny olona hafa na zavatra niainany.
Raha ny fisainana ratsy no jerena dia tsy voatery hoe nanjary kivy ilay toe-javatra ireo fa ny mpandika teny no nandika ireo zava-nitranga ireo tamin'ny fomba niforonan'ireo finoana ratsy ary niaretana ireo finoana ireo.
Ny ampahany lehibe amin'ny fampahalalana eto dia ny zavatra rehetra nianarana dia mety ho tsy mianatra koa.
Ny fisainana ratsy dia azo ovaina amin'ny fisainana miabo ary ity fihetsika toa tsotra ity dia mety hiasa amin'ny fahagagana hanamaivanana sy hanasitranana ny fahaketrahana mihitsy aza.
Hiran'ny fahaketrahana: inona ireo soritr'aretin'ny fahaketrahana?
Ny olona tsirairay dia hiaina ambaratonga samihafa sy karazana fahaketrahana isan-karazany, izay midika famantarana sy famantarana isan-karazany. Saingy misy fambara sy soritr'aretina amin'ny fahaketrahana vitsivitsy izay azo tanisaina mba hanampiana amin'ny famaritana raha toa ka voan'ny aretin-tsaina amin'ny fahaketrahana ny olona.
Ataovy ao an-tsaina fa ny famerenana ny lisitry ny famantarana sy ny soritr'aretina, dia tsy tokony hisolo toerana ny fifampidinihana amin'ny dokotera na psychotherapist izay afaka mamantatra tsara ny aretina ary manome fitsaboana sahaza azy.
Ny ankamaroan'ny dokotera dia hiezaka aloha hametraka ny tsy fitoviana eo amin'ny tranga alahelo na "manga" sy fahaketrahana amin'ny klinika. Soso-kevitra ny hitsidihanao dokotera raha sendra soritr'aretin'ny fahaketrahana matetika ianao mandritra ny tapa-bolana na mihoatra izay maharitra mandritra ny andro ary manomboka manelingelina ny fandaharam-potoanao isan'andro.
Ny sasany amin'ireo soritr'aretina mahazatra indrindra dia ahitana:
Fihetseham-po tsy misy fanantenana / tsy afa-manoatra: Fahatsapana ankapobeny fa tsy tsara amin'ny fiainana ny zavatra ary tsy tsara koa ny ho avy. Ary koa, ny fahatsapana fa tsy misy azo atao hanovana ny fomba fijery ny fiainana.
Very tombontsoa: Ny hetsika izay andavanandrom-piainana taloha na ireo zavatra nandrasan'ny olona indrindra, nanjary tsy mahaliana, na tsy manana fikarakarana handray anjara intsony ilay olona.
Fanelingelenana amin'ny fahazarana matory: Izany dia mety manomboka amin'ny torimaso be ka hatramin'ny torimaso tsy fahitan-tory na mifoha amin'ny misasakalina. Mety tafiditra ao koa ny reraka lalandava ary te hatory fotsiny na mandry mandritra ny andro.
Ny fiovan'ny fanantenana: Ny famoizam-po dia matetika miaraka amin'ny fihenan-danja be loatra na fihenan-danja satria ny olona iray dia tsy liana mihinana na hampiasa ny sakafo ho fomba hanalefahana ny fanaintainan'ny fahatsapany sy ny fahaketrahana.
Fahasarotana mifehy ny fihetsem-po: Mety miainga amin'ny fahasosorana / fahasosorana, tomany be loatra, na mora tezitra amin'ny olana na toe-javatra tsotra io.
Tandindomin-doza: Ny famoizam-po dia mety hiteraka fahatsapana harerahana izay manasarotra ny olona iray na dia hanao asa kely aza. Ny maodelin'ny faniriana hipetraka matetika fotsiny dia mety ho lasa tsikaritra kokoa.
Hery mifangaro: Ny olona miaina fahaketrahana dia mety manana olana amin'ny fifantohana amin'ny asa isan'andro izay efa vita. Mety ho sahirana koa izy ireo amin'ny fifantohana amin'ny resaka eo am-pelatanany na mety ho sahirana amin'ny fandikana ny lalana na famaliana fanontaniana.
Fanaintainana ara-batana: Ny aretin'andoha manaraka, ny lamosina, ny hozatra marary na ny tonon-taolana, ary ny olana amin'ny fandevonan-kanina dia afaka miaraka amin'ny famoizam-po amin'ny klinika.
Raha fantatrao ny olona iray izay mahatsapa izany soritr'aretin'ny fahaketrahana izany, na ianao no miaina soritr'aretina ny tenanao, dia tsara kokoa ny manatona dokotera na mpitsabo aretin-tsaina mba hahitana ny fitsaboana fahaketrahana mety indrindra.
Fitsaboana ketraka: ahoana no hitsaboana ny fahaketrahana?
Ilaina ny fahazoana fitsaboana tsara. Raha tsy voatsabo ny fahaketrahana, dia mety haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ary hiharatsy ny aretina hafa. Na ny olona manana soritr'aretina mahery aza dia mahasitrana ny fahaketrahana.
Misy fomba maro handresena ny fahaketrahana, anisan'izany ny:
Fanafody (takelaka fahaketrahana)
Fanafody hitsaboana ny fahaketrahana: iza amin'ireo anti-depresseur no misy?
Samy hafa be fanafody fanoherana ny fahaketrahana, fantatra amin'ny anarana hoe antidepressants, dia be mpampiasa amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana. Ny fanafody antidepressants dia an'ny vondrona maro samy hafa. Izy ireo dia misy fiantraikany amin'ny asan'ny neurotransmitter lehibe misy ao amin'ny ati-doha, na dia tsy takatra tanteraka aza ny fizotran'ny mekanisma.
Ny takelaka fahaketrahana dia manohana amin'ny fihenan'ny soritr'aretin'ny fahaketrahana amin'ny olona ketraka, indrindra rehefa ny fahaketrahana dia voajanahary mafy. Misy karazana antidepressants isan-karazany ampiasaina hitantanana ny fahaketrahana sy endrika hafa misy ny toe-pahakiviana ohatra ny aretina bipolar. Antidepressants dia manatsara ny soritr'aretin'ny fahaketrahana amin'ny fampiakarana ny fahafahan'ny neurotransmitter manan-danja, ny akora simika ao amin'ny ati-doha. Heverina fa ireo akora simika ao amin'ny ati-doha ireo dia afaka manamora ny fanatsarana ny fihetsem-po.
Ny karazana antidepressants manan-danja dia misy:
Selotonin seruponin mihidy fanerena (SSRIs): Ireo dia kilasy antidepressant vaovao. Ireo fanafody ireo dia miasa amin'ny fanovana ny haavon'ny neurotransmitter ao amin'ny ati-doha fantatra amin'ny hoe serotonin.
Antidepresant tricyclic (TCAs): Ireo no kilasy voalohany amin'ny antidepressants tonga tany an-tsena nanolotra fitsaboana ny fahaketrahana. Izy ireo dia misy fiantraikany amin'ny ambaratongan'ny mpitondra hafatra simika lehibe roa (izany hoe neurotransmitter), serotonine ary norepinephrine, ao amin'ny ati-doha. Tsy isalasalana fa tena mandaitra amin'ny fitantanana fahaketrahana ireo; misy vokany ratsy maro izy ireo. Noho izany antony izany dia tsy nijanona ho fanafody fitsaboana andalana voalohany intsony izy ireo noho ny fahaketrahana.
Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs): Ity dia kilasy antidepressant hafa. Ireto fanafody ireto dia manampy indrindra amin'ny olona ketraka izay tsy mahomby amin'ny fitsaboana hafa. Saingy ny Zava-mahadomelina betsaka amin'ny sakafontsika toy ny fromazy na divay, ary zava-mahadomelina sasany dia afaka mifandray amin'izy ireo, noho izany ny olona mihinana MAOI dia tsy maintsy mifikitra amin'ny fameperana henjana amin'ny sakafo.
Serotonin sy norepinephrine fanamafisana ny fitsaboana ihany koa (SNRIs): Ireo no karazana antidepressants vaovao. Manampy amin'ny fifehezana ny soritr'aretin'ny famoizan-tena izy ireo amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny fahafahan'ny otrikaina serotonin sy ny ati-doha norepinephrine.
Bupropion sy Mirtazapine ampiasaina hitsaboana ireo mararin'ny fahaketrahana dia vao teraka. Ny voka-dratsy aterak'ireto fanafody ireto dia misy ny tebiteby, tsy fahitan-tory, fitoniana, tsy fitaintainana ary fitomboan'ny lanja.
Betsaka fanafody fanoherana ny fahaketrahana efa azo eny an-tsena izao ny dokotera hitsaboana ireo mararin'ny fahaketrahana. Ny ankamaroan'ny fanafody izay misy amin'ny fitsaboana maoderina dia hita fa mandaitra amin'ny fitsaboana fahaketrahana. Ny fahombiazan'ireto fanafody ireto amin'ny fitsaboana ny olana dia miankina tanteraka amin'ny fahafahan'ny dokotera misafidy fanafody mety ho an'ilay marary. Ny marary dia tokony hamoaka ny soritr'aretina rehetra niainany tamin'ny dokotera mba hanampiana azy hahita ilay tena mety amin'ny marary. Raha ny mahazatra, ny marary iray izay omena fanafody antidepressant dia mety hiaina ireo soritr'aretina tsara ao anatin'ny telo ka hatramin'ny enim-bolana. Mba hialana amin'ny avo indrindra amin'ny fanafody, ny marary dia tokony ho vonona hiara-hiasa amin'ny dokotera amin'ny alàlan'ny fihinanana ny fanafody araka ny natoron'ny dokotera.
Ireo fanafody ireo koa dia mitsabo ny fahakiviana ary mivondrona ho mpampitony «kely» sy "lehibe".
Ireo mpampitony kely toy ny benzodiazepines dia tsy ampiasaina amin'ny fitantanana ny fahaketrahana satria mety hiteraka fiankinan-doha.
Nampiasaina ny tranquillizers lehibe mba hitsaboana ny karazana fahaketrahana melanolika na psychotic ary manome fifehezana simptika tsara ny soritr'aretina psychotic.
Ireo fanafody ireo dia mitazona lanjany lehibe amin'ny aretina bipolar. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fitsaboana mania ary mahatonga azy ireo ho 'anti-manic', ary miaraka amin'izay koa, ny fahafahan'izy ireo mampihena ny hasiahana sy ny fisehoan'ny fiovan'ny toe-po dia mamolavola azy ireo ho 'stabilizers amin'ny toetr'andro'.
Misy karazana fitsaboana ara-tsaina maro karazana amin'ny famoifoizana. Ireto no zava-dehibe indrindra:
Fitsaboana fitondran-tena kognitive (CBT)
Fitsaboana olona (IPT)
Betsaka ny olona manontany tena momba ny fomba hanasitranana ny fahaketrahana. Aza manahy fa azo sitranina ilay aretina. Azo tsaboina tsara amin'ny alàlan'ny fampiasana fanafody antidepressant sy psychotherapy. Ny fitambaran'ireto fomba roa ireto dia azo zahana ihany koa amin'ireo marary mijaly amin'ny fahaketrahana. Ny psychotherapy dia hita fa mandaitra kokoa amin'ireo marary mijaly amin'ny fahaketrahana maivana sy antonony. Ny dokotera dia mbola maniry ny fanafody hitsaboana ireo marary mijaly amin'ny endrika mahery. Ny fitsaboana electroconvulsive no fomba fitsaboana matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana amin'ny soritr'aretina psychotic.
Fanampiana amin'ny famoizam-po: inona no azon'ny namana na havany atao?
Raha sendra olana ara-tsaina na aretina dia maro ny olona no mitodika any amin'ireo mpiara-miasa na havana na namana voalohany. Izy ireo matetika no voalohany mahatsikaritra ireo soritr'aretina mahakivy sy fiovana. Ny fampiononany sy ny fanohanany dia zava-dehibe indrindra ho an'ireo olona ketraka. Raha sendra kivy be dia mila fanampiana koa ny mpiara-miasa sy ny havany.
Mety hanontany tena ianao hoe: "ny fomba hanampiana olona tratry ny fahaketrahana? ”. Ny havana aman-tsakaiza dia tokony hampahafantatra ny tenany momba ny sary amin'ny fahaketrahana. Amin'izany no hahafantaran'izy ireo bebe kokoa ny toe-javatra misy ilay olona ketraka sy hahafantarany ny fihetsiny. Ho fanampin'ny fanampiana ara-pitsaboana na ara-tsaina, dia mety hitranga ny vondrona manampy ny tena.
Ny antony manosika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famerenana amin'ny alahelo. Ny havana dia afaka manohana ilay olona traboina amin'ny fikatsahana fanampiana matihanina, misotro fanafody matetika ary mitazona fotoana nifanarahana tamin'ny dokotera na mpitsabo.
Ny fanampiana sy fanohanana mavitrika dia mety ho lasa manandanja indrindra rehefa misy ny fambara fa mety misy mamono tena. Zava-dehibe tokoa ny fandraisana am-pitandremana ireo famantarana ireo ary hiresahana izany amin'ny hafa. Raha tsy azo atao izany amin'ny toe-javatra misavorovoro dia misy serivisy toy ny serivisy ara-tsosialy ara-tsosialy, ivontoerana misy krizy na serivisy an-tariby an-tariby izay ahazoana fanampiana.